Tuesday September 10, 2019 - 10:52:34 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Mandheera ayaa sheegaya in xoogag aa u hubeysan oo katirsan Al Shabaab weerar ku qaadeen meel ku dhow saldhigga ciidamada KDF ay ku leeyihiin deegaanka Ceelraam.
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidanka Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu sheegay in weerarka lagu dilay ugu yaraan 9 askari Kenyaan ah islamarkaana lagu gubay illaa Afar gaari oo qaarkood ay yihiin nuuca gaashaaman ee Taawga loo yaqaan.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in weerarkan oo dhacay maanta duhurkii lagu gubay afar gaari oo kala ahaa Taaw,Kooyal Mutibiish iyo Probox.
Weerarka ayaa ciidanka Kenya qabsaday daqiiqado kadib markii ay kasoo baxeen saldhigga ay ku leeyihiin Ceelraam waxayna kusii jeedeen dhanka Xuduud beenaadka gaar ahaan wadad aadda degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
Illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin dowladda Kenya oo ku aaddan weerarkan khasaaraha badan geystay ee ka dhacay gudaha dhulka Soomaalida NFD.